तुलसीपुरमा परीक्षार्थीको कक्षा कोठाभित्र फोटो काण्ड - Dainik Nepal
तुलसीपुरमा परीक्षार्थीको कक्षा कोठाभित्र फोटो काण्ड
दैनिक नेपाल २०७५ चैत ४ गते ६:४४
तुलसीपुर, ४ चैत । सामान्यतयाः एउटा कक्षामा कति जना निरीक्षक हुन्छन् ? जतिसुकै ठूलोस्तरको भएपनि १ या २ जना । तर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा ५ जना निरीक्षक एकै कोठामा निरीक्षण गरिरहेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
विद्यार्थीमा रहेको परीक्षाको त्रास हटाउन, अनियमितता नगर्न र उनीहरूलाई आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउनका लागि व्यवस्था गरिएका निरीक्षकहरू एकै कोठामा पाँच जना हुँदा विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्ला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
परीक्षा चलिरहेका बेला परीक्षा हलभित्रै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा समिति संयोजक देवराज विश्वकर्मा, सदस्य दीपक कुमाल, नेपाल शिक्षक संघका प्रदेश सचिव भागवत पौडेल, लगायतका व्यक्तिहरू तस्वीरमा रहेको देखिन्छ ।
विद्यार्थीलाई अनुगमनका लागि गएका उनीहरूले पोज दिएर फोटो खिँचेको देखिन्छ । ‘विद्यार्थीलाई अनुगमन गरेको हो कि फोटो सेसन गरेको हो वुझ्न सकिएन’, एक अभिभावकले भने ।
कक्षामा आएर फेसवुकमा राख्नका लागि तस्विर खिच्दा आफूहरूलाई लेख्न असर गर्ने गरेको एक विद्यार्थीले बताए । ‘कक्षामा आएर कस्तरी राम्रो फोटो आउँछ भनेर पोज मिलाई मिलाई खिच्नुहुन्छ अनि अफ्ठेरो भइहाल्छ नि’, उनले थपे ।
विद्यार्थीलाई शान्त वातावरणमा परीक्षामा समावेश गर्नुको साटो उनीहरूलाई मानसिक दवाव दिने गरिएको पाइएको छ ।
शिक्षा समितिले बनाएको अनुगमन समितिका सदस्यहरूले जथाभावी रुपमा तस्वीर मोहका कारण विद्यार्थीलाई परीक्षामा अवरोध परेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत यसको विरोध हुन थालेको छ ।
विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा मोवाइल लैजान नपाइने भन्ने अनि आफैले लगेर फोटो खिच्नुले विद्यार्थीमा मानसिक असर पर्ने पूर्व प्रधानाध्यापक माधवप्रसाद लामिछानेले बताए । लामो समय केन्द्राध्यक्षको अनुभव समेत सम्हालेका लामिछानेले विद्यार्थीलाई उपयुक्त वातावरण मिलाइदिनेले आफै वातावरण विगार्न नहुन तर्क गर्छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा कार्यविधि २०७४ ले तोकेका नभएर वाहिरका क्षेत्रका व्यक्ति समेत अनुगमन समितिमा रहेका छन् ।
‘भत्ताको लोभमा जथाभावी अनुगमनमा गएको देखिन्छ, यसरी कार्यविधि नै मिच्न कहाँ पाइन्छ ?’ कार्यविधिले सामाजिक विकास समितिका संयोजकलाई अनुगमन समितिको सदस्य तोकेको भएपनि आफूलाई जानकारी नदिएको संयोजक तथा १० नम्बर वडाध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । औपचारिक रुपमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । मनलाग्ने हिसावले अनुगमन गरेको र तोकिएका मान्छेहरूलाई वास्ता नगरिएको लामिछानेले गुनासो गरे ।
अनुगमनकर्ताले भत्ता सहितको आफ्नो घुम्ने पालो पु-याएर दायित्व पूरा गरेपनि परीक्षार्थी र अभिभावकले यसलाई उत्ताउलोपन भनेका छन् । नर्सरीदेखि कक्षा आठसम्मको दौरानमा कहिल्यै अनुहार नदेखेका मान्छेहरू घरीघरी परीक्षा चलीरहेका बेला कोठाभित्र पस्दा परीक्षार्थीले डिस्टर्व भएको बताएका छन् ।
एकोहोरोरुपमा परीक्षामा बसेर विषय अनुसारको उत्तरपुस्तिकामा उत्तर लेखिरहेका बेला अनुगमनका नाममा गएका नचिनेका मान्छेहरूले सोधपुछ गर्ने, उठाउने , चेकजाँच गर्ने लगायतका कामले परीक्षालाई मर्यादित र शान्त पार्नुभन्दा पनि अमर्यादित काम गर्ने गरेको विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन् । विशिष्ट व्यक्ति भन्नेहरू हुल बाँधेर जाने गरेको उनीहरुले बताए ।
‘परीक्षा दिइरहेका हुन्छौ एकदमै ठूलो मान्छे बनेर आएका अनुगमनकर्ताहरू के छ नानी यहाँ, भनेर कापी पल्टाउने, प्रवेश पत्र हेर्ने र अलमल्याउने काम गर्छन्’, गुरुजजर माविमा परीक्षा दिएर फर्किदै गरेकी एक छात्राले भनिन् ।
निरीक्षकले कक्षामा हेर्ने मात्रै तर बोल्न नहुने तर्क राख्छन् विद्यालय निरीक्षक मुकुन्द रिजाल । नयाँ अनुहार देख्दा विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक त्रास हुने भएकाले सकभर झ्याल या ढोकाबाट मात्रै हेर्नुपर्ने रिजालले बताए ।
वर्षदिनको पढाईमा एक पटक पनि कक्षा नकुच्ने व्यक्तिहरू परीक्षामा सुटेटबुटेट भएर जानु राम्रो काम नभएको नरबहादुर डाँगीले बताए ।